Kani waa maqaal ku saabsan Cufisjiidadka Meerayaasha Koonka. adeegsi kale, eeg Cufisjiidad (faah faahin).
Cufisjiidad (Af Ingiriis : Gravity; ) waa awooda dabiiciga ee isku heeysa meereyaasha iyo xidigaha ay ku wareegaan. Cufisjiidadka lama arki karo lamana maqli karo laakiin waa la dareemi karaa. Awooda cufisjiidadka waa tan suurto galisay inaan dhulka dul socono. qoraxda oo ah Xidig aad u wayn isla markaana leh awood cufisjiidad aad u badan ayaa isku heeysa meereyaasha iyo dayaxyadooda iyo duniyaha kale ee Bahda Midaysay Qoraxdu oo dhulku ka mid yahay.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cufisjiidad&oldid=220819"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Oktoobar 2021, marka ee eheed 06:37.